LOLA COSMETICS Be (m) hoy Ghee Hydration Mask 350g
E HERINANDRO BLACK MIVERENANA ARY AMIN'NY VOLA MAHETRA! 🎄🎁
← pejy teo aloha
Vidiny ara-dalàna € 17.90
1 sisa tavela!
Ny hetra tafiditra. Vidiny fandefasana kajy amin'ny fandoavam-bola.
Lohatenin'ny Default - € 14.32 EUR
LOLA dia marika feno fanavaozana ary feno vazivazy feno. Ankoatry ny fifangaroan'ireo vokatrao dia tsy azo atao ny tsy tia ny anarana sy ny fonosana. Malalaka parabens, sulfat, paraffin, derivatives biby sy GMO. Marika tsy lozabe io ary miaiky izy ireo fa "ny habibiana tsy ananana amin'ny mialona".
Be (m) antsoina hoe Ghee Banana & Aloe Vera avy amin'i Lola Cosmetics dia saron-tava hydrates legioma miorina amin'ny voankazo, organika ary vegan.
Ny fampiasana azy io dia mamerina ny hydration voajanahary ny volo ary manome sentika silky sy mamirapiratra ihany koa. Izy io dia naseho ho an'ny volo manjavozavo sy tsy manana fiainana.
Inona no mahazo ny volonao?
- Volo mihombo sy mamiratra;
- volo maranitra sy malemy;
- Fametrahana otrikaina;
- Akondro, Menaka Jojoba ary ahidrano: manan-karena proteinina manatanjaka sy manondraka ireo kofehin'ny volo malemy izy ireo, avy ao anatiny ka mamela ny volo ho malemilemy kokoa.
Aloe Vera: Izy dia mpiara-miasa matanjaka ho an'ny fahasalaman'ny volo sy ny volo, mamela ny otrikaina sy otrikaina mora kokoa hametahana ny volo, izay mampivoatra ny hazavana sy ny hatsarany.
Rano kelôla: Manankarena amin'ny asidra amine, manome malefaka sy malama ho an'ny volo.
Fandefasana maimaimpoana amin'ny fividianana mihoatra ny 50 €.
Fandefasana mahazatra (NACEX) -1 ka hatramin'ny 3 andro fiasana -> 3.85 € (isa niisa)
In-Store pickup - 24h / 48h -> maimaim-poana
→ Ny fisintomana any am-pivarotana dia azo atao ny talata ka hatramin'ny asabotsy eo anelanelan'ny 10 am - 19 hariva, ao amin'ny HAIR BEAUTY STUDIO CABELEIREIROS [Avenida 25 de Abril, 18 D 2825-415 | Coast Caparica | Portugal]. Ny fisintonana rehetra ao amin'ny magazay dia hamafisina amin'ny alàlan'ny SMS aorian'ny fandoavana ny kaomandy. Raha te hijery ny fisian'ny fisintonana avy hatrany ianao dia mifandraisa amin'ny +351 963 556 814.
→ Ho an'ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny famindrana banky, ny fandefasana dia vita aorian'ny fandefasana porofon'ny fandoavam-bola.
Any am-pamaranana ny baiko dia homena, ny entin-tsofina, ny fanondroana ary ny vola tokony handoa. Azonao atao ny mandoa vola any amin'ny ATM, amin'ny alàlan'ny Internet na toeran-kafa izay manaiky ny momba ny ATM.
Rehefa misafidy ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny carte de crédit dia tsy maintsy ampidirinao ny angona eny an-tsaha izay hita. * Ny angon-drakitra nampidirina dia tsy voatahiry ao anatin'ny rafitra ataonay noho ny antony mahatonga ny filaminana sy ny tsiambaratelo.
Data famindrana banky:
* Raha ataonao ao amin'ny tranokalan'ny bankinao ny famindrana dia apetraho ao anatin'ny famaritana ny isa.
VITANA NY FIKAMBANANA Raha tsy voaloa ilay baiko ao anatin'ny 48 ora, dia ho nofoanana avy hatrany io ary hahazo mailaka milaza azy ianao.
* Aorian'ny fanafoanana baiko dia ilaina ny mametraka lamina vaovao.
Zarao amin'ny Facebook Twitter Ampio ao amin'ny Pinterest
← PEJY talohan'izay
JEREO NY TOO
Be (M) Crita miaro Dita Praia Pre / Post Sun & Sea 250g
Vidiny ara-dalàna € 7.90 Vidiny mandanjalanja € 6.32
Vidiny ara-dalàna € 9.50 Vidiny mandanjalanja € 7.60
LOLA COSMETICS Be (m) hoy Ghee Nutrition Mask 350g
Vidiny ara-dalàna € 16.50 Vidiny mandanjalanja € 13.20
Miverena any LOLA COSMETICS
© 2020, NY HAIRANAREO.